रुकुम नरसंहारको विरुद्धको संघर्ष! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार रुकुम नरसंहारको विरुद्धको संघर्ष!
रुकुम नरसंहारको विरुद्धको संघर्ष!
प्रेम र जीवन एकअर्काबीच पर्यायवाची गठजोड हुन्। प्रेम नहुँदो हो त मानव जीवनको के अर्थ हुन्थ्यो ? प्रेमको अनुरागले नै सृष्टिको अस्तित्वलाई डोर्‍याइरहेको छ आजसम्म। नवराज र सुषमाले पनि प्रेम गरे। त्यति मात्र हैन, नेपाली समाजमा अहिलेसम्म कथित ठूला भनिएका दर्शन र पद ओगटेका व्यक्तिहरूका साहस र क्षमताभन्दा धेरै महान प्रेम गरे दुवैले।
नवराजको अन्तर्जातीय प्रेमलाई सार्थक बनाउन पहिलो पंक्तिमा साथ दिँदै ज्यानको आहुती दिन आँट गर्ने लोकेन्द्र सुनार, सन्दिप बिक, टीकाराम सुनार, गोविन्द शाही, गणेश बुढाले समाजको कुहिसकेको जातीय व्यवस्थाविरुद्घ प्रतिरोध गरे। अर्कातिर शाही थरकी ती साहसी युवती जसले जातरूपी कुरूप मान्यताविरुद्घ प्रेमरूपी धावा बोल्ने आँट गरिन्। उनी सलामकी भागिदारी छिन्। यो जघन्य हत्याकाण्डमा जीवित भए पनि मरेतुल्य र जीवनभर आहत हुनेछन् उनी। जात व्यवस्थारूपी हिन्दु समाजमा रहेको कंलक प्रथाविरुद्घ जीवन उत्सर्ग गर्ने युवालाई जति सह्राना र सम्मान गरे पनि कम हुन्छ।
अत्याचारमा साक्षी किनारा
अहिले आम वृत्तमा एउटा प्रश्न उठेको छ– गैरदलित प्रभावशाली युवा नेताहरू किन संसद्मा बोल्दैनन् ? दलित समुदायमाथि भएका हत्या–हिंसामा दलित सांसद मात्रै बोल्ने ? ताली पनि दलित सांसद मात्रैले बजाउनुपर्ने ? झन् शीर्ष भनिएका नेताले त यस्ता झीनामसिना कुरामा बोल्नै भएन किनकि उनीहरू शीर्ष जो परे। उनीहरूका लागि जातीय र लैंगिक हिंसा र यसबाट सिर्जित हत्या पनि निम्नकोटीकै मुद्दा हुन्। अहिलेसम्म दलित समुदायका हत्या र हिंसामा कतिपटक संसद्को रोस्टम घेराउ भयो ? किन संकल्प प्रस्ताव बन्दैनन् ?
जवाफ प्रस्ट छ। आम गैरदलित समुदायको नेताहरूलाई लाग्छ— दलितमाथि हुने अत्याचार, विभेद र हिंसा स्वाभाविक र सामान्य हो। पार्टीहरूका लागि छुवाछूतका मुद्दा सामान्य सवाल हो। हैन भने अहिलेसम्म कतिवटा पार्टीले जातीय उत्पीडनका विषयमा देशव्यापी अभियान चलाए ? जनतालाई छुवाछूतविरुद्घ प्रशिक्षित गरे ? जवाफ आउँछ। भएको छैन। किनकि दलित समुदायका लागि बोल्दा न सत्तामा जाने ढोका खुल्छ, न कुनै मालदार कर्पोरेट निगमले आर्थिक सहयोग गर्छ, न कुनै राजनीतिक लाभ हुन्छ। अनि किन कसैले बित्थामा टन्टा बेहोर्छ।
गत वैशाख १४ गते कास्कीका मोहन सुनारले मिडियामा भने, ‘मलाई नस्वीकार्ने, संकटमा मेरो पक्षमा नबोल्ने समाज मलाई किन चाहियो ? ’ प्रश्न गम्भीर छ। कास्की बाटुलेचौरमा आफ्नो भाइको मृत्युपछि महानगरपालिकाको लगानीमा बनेको किरियापुत्री भवनमा जातका कारण उनले किरिया बस्न नपाएका मात्रै हैनन्, उल्टै सो घटनामा उनलाई धम्क्याउने र आक्रमण गर्नेसम्मको काम भयो। त्यसपछि सुरु भएको प्रतिरोधको दौरान व्यक्त गरेको पीडायुक्त स्वर हो यो।
कुरो सय आना ठीक छ। किनकि आफूलाई विपत् पर्दा साथ नदिने, न्यायका लागि नबोल्ने व्यक्तिलाई किन मैले सहृदयी वा आफन्त मान्नु ? त्यस्तै आफ्नो समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने, न्यायका लागि अगुवाइ नगर्ने पार्टी र व्यक्तिलाई किन बोकी हिँड्नु ? वा त्यस्ता व्यक्तिलाई किन नेताका रूपमा स्वीकार गर्ने ? दुईतिहाइको दम्भमा आज उन्मत्त नेतृत्वलाई सत्तामा छेलोखेलो गर्न पाउनुमा दलित समुदायको योगदान छैन ? एघार सय दलित समुदायको बलि चढाएर माओवादीलाई कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले पार्टी सत्तामा दाबी गर्ने मौका जुरेको हैन र ? आज कहाँ पुग्यो माओवादीले दलितका लागि उठाएका विशेषाधिकारको माग ?
कुरो सीधा छ। जातीय हिंसाको पक्ष लिने, समानताविरुद्घ लाग्ने वा त्यस्ता मतियारको संरक्षण गर्ने नेता वा पार्टीलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छैन। त्यसैले उत्पीडित र दलितको समग्र मुक्तिका लागि नयाँ यात्रा र बहसको सुरुवात गर्ने बेला आयो। कुन पार्टी उत्पीडित मैत्री छ, कुन व्यक्ति न्याय र समानताका लागि बोल्छ, उनीहरूका साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने हो।
रुकुम नरसंहारको विरुद्धको संघर्ष र आन्दोलनले अब अजित मिजारसहितको शवले न्याय पाउने गरी मात्र विश्राम लिनुपर्छ।
रुकुम घटनामा सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्कहरू छरपष्ट छन् भने कतिपय मौन बसेका छन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यस्तो बेला मौनता साँध्नु पनि अन्यायलाई साथ दिनु हो। आजका दिनमा एउटा प्रश्नले मथिंगल हल्लाइरहेको छ, ‘रुकुम घटनाले कति गैरदलितलाई विचलित बनाएको छ ? ’ युवा नेता जागृत रायमाझीको भनाइ छ। यो घटनाले कुनै गैरदलितलाई दुख्दैन, आक्रोशित बनाउँदैन भने हामीले बुझ्नुपर्छ– उसको नशामा अझै जातीय व्यवस्था भरिएकोे छ।
ढोँगी प्रगतिशीलताभित्र गढेको मनुवाद
हरेक महिला वा दलितमाथि अत्याचारका घटनामा कुनै न पार्टी जोडिन्छ, अनि सुरु हुन्छ लेनदेनको खेलोमेलो। अनन्त पीडितका आँसु र पीडाका भेलमा न्याय हराउँछ। त्यो चाहे निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड होस् वा चार वर्षदेखि अस्पतालमा पल्टिरहेको अजित मिझारको शव। ०६८ पछि लगातार २३ जना दलितहरू अन्तर्जातीय विवाह, बलात्कार र छोएको निहुँमा मारिए। तथ्यहरूले भन्छ– आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा दलितमाथि ज्यादतीका ४५ मुद्दा थिए। तर तीमध्ये २१ वटा मुद्दा मात्रै कसुर ठहरिए। बाँकीमा पीडकले सहजै सफाइ पाए।
पछिल्लो समयमा दलित समुदायमाथि भएको जघन्य अपराधमा सत्ताधारी नेकपा पार्टीको कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापा र रुकुम चौरजहारीको ६ जनाको जातीय नरसंहारमा वडा नं ८ का अध्यक्ष डम्बर मल्लले नै अगुवाइ गरेको कुरा बाहिर आयो। सर्वहारा र दलित उत्पीडितको पार्टीको दाबी गर्ने नेकपाले यी दुवै नेताहरूको आपराधिक घटनामा संलग्नतालाई केन्द्रीय स्तरबाट कुनै माफिनामा वा छानबिनका कुरा अगाडि बढाएका छैनन्। अझ नेकपाकै वरिष्ठ नेता र पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रुकुमका सांसद जनार्दन शर्माको संसद्मा दलितका कारण मुठभेट भएको अभिव्यक्ति जिब्रो चपाइचपाइ बोलेको शब्दावलीले प्रस्ट पारेको छ कि थप रुकुमको जातीय नरसंहारमा पनि दलित समुदायले न्याय पाउने कुरा सजिलो छैन।
दलित अगुवाले आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्न अबेर भइसक्यो
रुकुम घटनापश्चात् ठूलो संख्यामा दलित समुदायले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर, बोलेर आफ्ना पीडा साटासाट गरिरहेका छन्। बौद्घिकतामा अगाडि भएका, देशभित्र र बाहिरकाले पनि हप्तौं निदाउन नसकेको, विचलित भएको, भित्रभित्रै आक्रोशले भरिएको पीडा पोखेका छन्। सामान्य मानवीय संवेदना भएका जोकोहीलाई यस्ता निर्दौष मान्छेहरूको सामूहिक नरसंहारले उद्वेलित बनाउँछ नै, अझ दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफूलाई त्यही ठाउँमा राखेर हेर्ने र महसुस गर्ने हुनाले स्वाभाविक रूपमा गैरदलितलाई भन्दा उसलाई बढी पीडा हुन्छ। तर के तत्घटनामा संवेदनशील, भावुक र आक्रोशित हुँदैमा यस्ता घटना रोकिन्छ ? भावाकुल हुनु राम्रो कुरा हो तर त्यसभन्दा हजार गुणा महŒवपूर्ण छ आफ्नो दायित्व बहन गर्नु।
अम्बेडकर जात व्यवस्थाविरुद्घ लड्ने ऐतिहासिक योद्घा व्यक्तित्व हुन्। तर उनी अमेरिका र बेलायतबाट विद्यावारिधि गरेर फर्केपछि आफ्नो सहज जीवन रोज्दै उच्च तहको जागिर र पद पैसाका लागि लागेनन्, बरु उनले भारत फर्केपछि दलित उत्पीडनविरुद्घ संगठन निर्माण गर्दै संघर्षको बाटो रोजे। र बाँचुञ्जेल दलित समुदायमाथिको अत्याचारविरुद्घ लडे। मुक्तिको यात्रा पक्कै सजिलो छैन। जो उत्पीडनमा छ, उसैले अगुवाइ गर्न र जोखिम लिन तयार नभए कसरी उत्पीडन अन्त्य हुन्छ। अन्य न्यायप्रेमीले त सघाउने हो।
के यसका लागि दलित समुदायबाट विकसित भएका बौद्घिक र विवेक भएका मान्छेहरू अगाडि आउन तयार छन् ? हालसम्म पनि हिजोकै विष्ट बराजुको निगाहमा बाँच्ने र माग्ने समुदायको मानसिकताबाट बाहिर निस्कने आँट विकास गर्न ढिलाइ भइसक्यो। त्यस्ता जुझारु र विवेकी बौद्घिक दलित युवा जमात आजको दलित आन्दोलनले खोजिरहेको छ।
विडम्बना कतिसम्म छ भने दलित समुदायकै लगानीमा जान्ने सुन्ने र समृद्घ भएपछि आफ्नो समुदायमाथिको उत्पीडनको शृखंला अन्त्यको दायित्व लिन पन्छिने कृतघ्न प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। आफूमाथि उठेपछि आफ्नो धरातल बिर्सनु कत्तिको न्यायिक हुन्छ ? पिँधमा रहेका दलित समुदायका व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो समुदायलाई माथि उठाउन सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति पनि हामीमध्ये ठूलो संख्यामा दलित समुदायले बोकी हिँडिरहेका छौं, जसको कठोर विश्लेषण हुन जरुरी छ।
मनुवादले थोपरेको जातको भाइरसले छियाछिया पारेको दलित समुदायको सभ्यता र मर्यादाविरुद्घ हाम्रो चोटिलो प्रहार हुनैपर्छ तर जात व्यवस्थाविरुद्घ सशक्त प्रतिकारमा उत्रिराख्दा हामी सबै गैरदलितलाई घृणा गर्न सक्छौं र ? अवश्य सक्दैनौं यो मुक्तिको विकल्प पनि हुन सक्दैन। किनकि यो कुनै व्यक्तिविशेष जात र समुदायकेन्द्रित लडाइँ हैन। यो सिंगो जात व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको संरचनागतविरुद्घको लडाइँ हो।
रुकुम घटनालगत्तै न्यायका पक्षमा सचेत गैरदलित पत्रकार, लेखक, अनुसन्धानकर्तालगायतको १३१ जनाको अगुवाइमा ‘विभेदविरुद्घ गैरदलित मौन नबसौं’ अभियान सशक्त रूपमा अगाडि आइरहेको छ। सयौं सचेत गैरदलित अगुवाहरू यो लाइनमा आउनु आफैंमा स्वागतयोग्य छ। गैरदलित बौद्घिक जमात देशभरिका गैरदलितलाई रुकुम घटनामा राज्यलाई दबाब उत्पन्न गर्नका लागि आह्वान गरिरहेका छन्। जात व्यवस्था हाम्रा स्वार्थी पुस्ताले थोपरेको मानव कलंक हो। कालान्तरमा यो आफैं एउटा शोषणको व्यवस्था बन्न पुग्यो। तसर्थ यसलाई हटाउन पनि न्यायप्रेमी पुस्ता सँगै नलडी सम्भव छैन। तसर्थ विभेदविरुद्घ सबै जुटौं। अबको आन्दोलन सिंगो जात व्यवस्थाविरुद्घ हुनुपर्छ। रुकुम नरसंहारको विरुद्घको संघर्ष र आन्दोलनले अब अजित मिजारसहितको शवले न्याय पाउने गरी मात्र वि श्रामलिनुपर्छ।
गाँजाको भण्डार कुखुराको खोरमा